Osaka City University - Study in Japan. Students International
Osaka City University Yokuxhumana
Wasekelwa : 1880
Ungakhohlwa xoxa Osaka City University
Bhalisa at Osaka City University
Osaka City University yayigubha iminyaka engu 135th e 2015. Manje enyuvesi ngobukhulu zomphakathi in Japan, nge 8 amandla kanye 10 izikole graduate, umnikelo impohlo, master futhi zobudokotela izifundo ezihlukahlukene eyala. Ngesikhathi kusungulwa yayo, imeya Osaka, nguHajime Seki, wasinika umsebenzi okhethekile: "Le nyuvesi omusha akufanele kube ukulingiswa amayunivesithi kazwelonke; kufanele bakhonze izidingo zezakhamizi; ucwaningo original isiko, umnotho, kanye nomphakathi umuzi ka-Osaka futhi ukuxhumana imiphumela abantu bomuzi. "Umbono sakhe waqhubeka behlonipha yithi kube yilolu suku.
Izinkinga ezibhekene Osaka izinkinga ezifanayo ezibhekene emadolobheni emhlabeni wonke. Lapha at OCU, uyoba nethuba ukuthola imfundo kanye afeze ucwaningo ezokwenza inselele ukuba uthole izixazululo ezinkingeni ezifana nokuguquguquka kwesimo sezulu, ahlanzekile ugesi, impilo ezisemadolobheni, kanye nokubhekela izinhlekelele zendalo, izinkinga okuyinto ingaxazululwa kuphela ngokuhlanganisa yayihluke omhlabajikelele nawasekhaya.
Lokhu ungubani sikole bukhicite ababethole ezimbili Nobel, UProfesa Emeritus Yoichiro Nambu e Physics and Professor Shinya Yamanaka Ezokwelapha. Kulo moya engumthengisi, OCU ihlose bazakhele abantu abangakwazi bathathe ubuholi izindima emphakathini, ucwaningo ovulekile original ezingeni lamazwe omhlaba kanye babe ukuziqhenya umuzi.
OCU ekunika emkhathini ohlukahlukene futhi ovulekile intellectual lapho uzokwazi ukudingida ngokukhululekile futhi ukuthuthukisa imibono yakho, besebenzisa omuhle imikhakha eyahlukene isifundo kanye nocwaningo izikhungo kanye ezifuywayo international network eqinile academic. Sikumema nonke ukuza bese bezihlanganisa nathi ukuxazulula izinkinga namuhla nekusasa.
Ukuze kuzuzwe mission jikelele a university- the ngakulolunye luhlangotsi ithalente esiphakeme futhi search for iqiniso.
Ukuze kube eyunivesithi ukuthi izakhamizi kungaba siziqhenye khona-
Ukuze Babheka umuzi njengoba isihloko isifundo futhi uthole amakhambi ezihlakaniphile for izinkinga zayo ezithile.
Ukuze anikeze emuva izithelo imisebenzi imfundo nocwaningo umuzi kanye netakhamiti talo kanye neqhaza ekuthuthukiseni kokubili umphakathi wendawo kanye nemmango.
Ukuze kube enyuvesi useduze izakhamuzi
Ukuze afeze emasikweni kanye nesiko komuzi Osaka, njengenhlangano eyunivesithi ezisemadolobheni-based.
Ukukhuthaza imfundo ovulekile creative kanye nocwaningo, kanye nokunakekelwa kwempilo standard okusezingeni.
Ukuze uthuthukise imisebenzi ezihlukahlukene zedolobha ezifana namasiko, umnotho, umkhakha, kanye nokunakekelwa kwempilo, ndawonye izakhamizi, futhi azame ukuba uqaphele isimo ingcebo yeqiniso.
Osaka City University (OCU) yakhiwa ikhono eyisishiyagalombili kanye nezikole eziyishumi graduate. OCU eselandisa esiqalweni kuya 1880 ekusungulweni Osaka Commercial Training Institute, maphakathi nesifundo commercial nezezimboni e Osaka. The Institute saqanjwa njengoba athuthukiswe futhi lakhula, ekubeni Osaka City Commercial School (1889), Osaka City Commercial College (1901), Osaka University of Commerce (1928), futhi ekugcineni Osaka City University e 1949. Ngo-April 2006, Osaka City University kabusha njengoba umphakathi corporation enyuvesi.
Ekusunguleni OCU njengoba enyuvesi kamasipala wokuqala eJapane, Dr. nguHajime Seki, imeya of Osaka, iveze umbono olwehlukanisa. I nyuvesi omusha akufanele kube ukulingiswa amayunivesithi kazwelonke; kufanele bakhonze izidingo zezakhamizi; kufanele wenze ucwaningo original isiko, umnotho, kanye nomphakathi umuzi ka-Osaka futhi ukuxhumana imiphumela abantu bomuzi. Kuwo wonke umlando walo oneminyaka engu-70, Osaka City University uye banamathela ngokwethembeka lo mbono ekusungulweni ngokwenza nezindaba yasemadolobheni omunye ukukhathazeka yayo central.
Uyafuna xoxa Osaka City University ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Osaka City University kumephu
Izithombe: Osaka City University Facebook ezisemthethweni
Izibuyekezo Osaka City University
Joyina ukuze kuxoxwe Osaka City University.